Adobe Zii: Maxay tahay maxaase loo adeegsadaa? | Androidsis
Adobe Zii: Maxay tahay maxaase loo adeegsadaa?
Waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah codsiyada loogu talagalay Adobe oo sii xoogaysanaysa, waa mid shaqeynaya oo ansax u ah kicinta aaladaha shirkadan. Qalabkani wuxuu u adeegi doonaa inuu ku dhajiyo codsi kasta oo shirkadda ah qaab fudud wuxuuna culeys ku helayaa kuwa inta badan isticmaala.
Adobe Zii waxaa caan ku ah dadka isticmaala Mac Os marka ay timaado in la xoqo codsi kasta oo la xiriira Adobe CC iyo in laga tijaabiyo barnaamij kasta oo ka socda shirkadda caanka ah. Markaad kiciso waxaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysano dhammaan astaamaheeda, ha noqoto Photoshop, Acrobat, Dreamweaver, Indesign, Lightroom iyo qolal kale.
1 Maxaa loo adeegsadaa Adobe Zii?
2 Adobe Zii sharci ma yahay?
3 Faa'iidooyinka ku rakibidda Adobe Zii
4 Faa'iido darrooyinka Adobe Zii
5 Ku rakibidda Adobe Zii
6 Talooyin ku saabsan isticmaalka Adobe Zii
7 Waxaa lagugula talinayaa inaadan cusbooneysiin
8 Fariinta digniinta ah
Maxaa loo adeegsadaa Adobe Zii?
Magaca Zii waa sida loo yaqaan Adobe Zii Patcher, wuxuu u ololeeyaa nooc kasta oo Adobe CC ah maantana waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan kumanaan isticmaale. Zii waxaa loogu talagalay inuu caawiyo dadka isticmaala inaad si buuxda uhesho mid ka mid ah barnaamijyadan soo socda:
Dad badan ayaa adeegsada nooc loo yaqaan 'Trial' ka dibna leh nooca buuxa oo leh guji fudud oo jiir ah, maadaama ay ku filan tahay rakibidda Adobe Zii Patcher oo aad raacdo dhowr tallaabo. Waxay ku shaqeysaa noocyo ka da 'weyn kuwii ugu dambeeyay, iyo sidoo kale kuwii hore.
Adobe Zii wuxuu isticmaali doonaa ka faa'iideysi si uu uga guuro nooca tijaabada ah midda dhammaystiran, maadaama ay badanaa siiso muddo dheer oo caddaalad ah markii la fuliyo. Codsigan waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Mac, laakiin sidoo kale waa loo heli karaa kuwa u adeegsada Windows nidaamkooda hawlgalka.
Sida barnaamij kasta oo wax ku dhejiya, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay barnaamij aan sharci ahaan loo aqoonsanayn, sidaas darteed isticmaalkiisu wuxuu ku xirnaan doonaa kuwa rakibay. Waa codsi daneynaya dhammaan kuwa doonaya inay soo laabasho wanaagsan helaan dhammaan barnaamijyada Adobe.
Adobe Zii sharci ma yahay?
A Patch marna sharci ma aha, markaa waa aalad lagu dhammaystiro barnaamijka kombiyuutarka intaas oo dhanna dhawr tallaabo. Noocyada Adobe ayaa lagu qiimeeyaa qiimo ka hooseeya ama ka sareeya iyadoo kuxiran nooca aad doorato, ha noqoto nooca guriga ama nooca xirfadeed.
Ujeedada Zii waa inaan tijaabino mid ka mid ah kumbuyuutarrada Adobe waqti cayiman, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad kahesho nooca ugu dambeeya soosaaraha. Waxaa loo arkaa inay tahay codsi muhiim u ah kuwa u baahan adeegso qalab muddo gaaban ah.
Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad haysato liisanka asalka ah inaad awood u leedahay inaad u isticmaasho sheyga si buuxda, iyo sidoo kale inaad taageerto kuwa ka dhigaya jawi shaqo dad badan suurtagal. Shirkadu badanaa waxay siisaa waqti qiimeyn, waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho waqtigaas oo udhaxeeya 7 ilaa 30 maalmood.
Faa'iidooyinka ku rakibidda Adobe Zii
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah awood u lahaanshaha isticmaalka sheyga gebi ahaanba, iyada oo aan xaddidneyn dhinacyada qaarkood iyo waxaas oo dhan waxay ku xirnaan doonaan horumariyaha. Shirkado badan ayaa bixiya nooca tijaabada ah wakhti xaddidan oo had iyo jeer ma leh 100% shaqooyinkeeda, dhammaantood si aad u hesho nooca ugu dambeeya.
Adobe Zii Patcher wuxuu yimaadaa si uu u ansixiyo mid kasta oo ka mid ah codsiyada Adobe, ha ahaato noocyadii hore ee laga soo bilaabo 2016 ilaa hadda, 2021. Waa balastar u shaqeysa xilligan si sax ah mana laha furin ama wax laxiriira kuusoo bandhigida nuglaantaada.
Haddii aad tahay naqshadeeye oo aad u baahan tahay inaad tafatirto sawir waxaa fiican inaad isticmaasho Photoshop markaad wax ka bedeleyso qaar ka mid ah muuqaalka. Nooca Tijaabadu wax walba kuma darto, laakiin haddii aad leedahay midka ugu dambeeya, waxaad yeelan doontaa xulashooyin badan oo hadh leh oo aad isticmaali karto, haddii ay yihiin shaandhooyin, lakabyo iyo kuwa kale.
Faa'iido darrooyinka Adobe Zii
Waxay caadi ahaan dhacdaa marar badan markii la adeegsanayo dalab Noocaan wuxuu ka tagi doonaa albaab kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah, sidaas darteed wuxuu noqon karaa mid ka mid ah dabaysha isticmaalkiisa. Hada isticmaaleyaashu ma aysan soo sheegin dhibaatada, laakiin had iyo jeer waxaa jira waxoogaa kalsooni daro ah oo laga helo qorayaasha qalabka la midka ah Zii.
Adobe Zii wuxuu ka shaqeeyaa Windows iyo Mac Os, waa laba ka mid ah nidaamyada sida weyn loo isticmaalo maanta, kan dambe had iyo jeer wuxuu ku shaqeeyaa kombiyuutarada shirkadda Cupertino. Abuuraha boggan caanka ah ee Patch ayaa ka digaya in barnaamijku ka madhan yahay khayaanada, inkasta oo ay lagugula talineyso inaad gudbiso antivirus casriyeysan iyo qalab antiwareware ah.
Taageerada horumariyaha ayaa muhiim u ah cusbooneysiinta mid ka mid ah codsiyada hadda suuqa ku jira, waa qodob kale oo ay tahay inaad tixgeliso. Adobe Zii wuxuu si kumeelgaar ah ugu adeegi doonaa dadka ubaahan in ay cidhiidhigaan qolka ay ku rakibeen Adobe
Ku rakibidda Adobe Zii
Mid ka mid ah tilmaamaha looga baahan yahay abuuraha Adobe Zii Patch ma lahan xiriir internet mar arjiga lagu rakibo Windows / Mac PC. Waxaa ugu wanaagsan in laga saaro fiilada haddii ay si toos ah ugu tagto PC-ga ama laga furo Wi-Fi haddii aad toos ugu haysato calaamaddan.
Qaaciddada kale ee degdegga ah ayaa ah in la damiyo modemka / router-ka, haddii aad aragto inay tani kuu fududaanayso, samee ugu yaraan inta ay qaadanayso Adobe Zii si uu ugu rakibo kombuyuutarkaaga. Fursadaha waa kala duwan yihiin, sidaas oo kale kan kugu habboon waqtigaas samee si aanad wax dhibaato ah u arag.
Si aad u rakibto Adobe Zii samee talaabooyinka soo socda:
Ka jar xiriirka internetka kombiyuutarkaaga, adoo ka furaya fiilada, ka furaya Wi-Fi ama daminaya router-ka
Ku rakib barnaamijkaas Adobe CC kombiyuutarkaaga, mid ka mid ah kuwa aan kor ku soo sheegnay, ama Photoshop, Premier ama nooc kasta oo ka mid ah noocyadiisa oo laga heli karo bogga rasmiga ah ee Adobe
Xidh dhamaan barnaamijyada laxiriira Adobe, xitaa Reader hadii uu furan yahay, maxaa yeelay tani waxay saameyn ku yeelan doontaa rakibida Adobe Zii Patcher
Daahfurka Adobe Zii ee loogu talagalay Mac ama nooca kombiyuutarka oo sug inta ay ku shubaneyso nidaamka
Dooro arjiga oo guji "Patch ama DRG" loogu talagalay Adobe Zii iskaanka aaladda Adobe, mid ama in ka badan oo kuwa aad ku rakibtay kombuyutarkaaga
Tani way kugu filnaan doontaa, uma baahnid inaad wax badan ka qabato inta aad sugeyso balastarka otomaatiga ah ee mid ka mid ah codsiyada iyo waxaas oo dhan dhowr daqiiqo gudahood. Adobe Zii Patch bulshada ayaa si weyn u isticmaali jirtay mudo dheer. waxayna sifiican ugahadlaan mashruuca.
Talooyin ku saabsan isticmaalka Adobe Zii
EWaxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho Adobe Zii codsiyada rasmiga ah, waxaa lagu talinayaa in qalabka laga soo dejiyo websaydhka oo aan laga soo dejisan bogagga kale ee dibadda. Rakiibuhu wuxuu ka nadiif noqon doonaa fayrasyada, iyo sidoo kale inuusan wax qalad ah lahayn, ha ahaado soo dejinta ama rakibidda.
Barnaamijyada la shaqeeya Adobe Zii waa: Acrobat DC, Kadib Saamaynta, Animate, Audition, Bridge, Animation Character, Dimension, Dreamweaver, Sawire, InCopy, InDesign, Lightroom Classic, Media Encoder, Photoshop, Prelude, Premiere, Premiere Rush, XD, Photoshop Elements, iyo Premiere Elements.
Abuuraha Zii waa horumariye Ruush ah, wuxuu doorbidayaa in aan magaciisa la sheegin maadaama ay tahay Patch kaas oo isticmaalaha uu uga faa'iideysan karo wax kasta oo ka yimaada barnaamijka Adobe. Adobe Zii waxaa kugula taliyay dad badan, kuwa horeyba isku dayay oo ka faa'iideysanaya dhammaan noocyada astaanta.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan cusbooneysiin
Waxaa lagugula talinayaa inaadan cusbooneysiin, waa inaad joojisaa cusbooneysiinta otomaatiga ah laga bilaabo Creative Cloud si looga fogaado dhibaatooyinka. Adobe Zii waa fududahay in la isticmaalo, waxaa lagugula talinayaa dhammaan wixii ka sarreeya si aad u sameyso tallaabooyinka kor ku xusan oo aad dhaqaajiso iyadoon ku xirneyn internetka.
Haddii balastarka la cusbooneysiiyo, kuwa horeyba u lahaa barnaamijyada diyaar ma lahaan doonaan wax dhibaato ah, dhibaatadu waxay noqon doontaa isticmaaleyaasha cusub ee aan samayn balastarka. Talada ayaa ah in lagu sameeyo nadiif, Haddii aad horey u haysatay ka hor, waxaa fiican inaad ka tirtirto oo aad markale ku sameyso xoq.
Adobe Zii hadda wuxuu ka mid yahay barnaamijyada la tixgeliyey ahaanshaha mashruuc aan lahayn taariikh asal ahaaneed sidoo kale abuuraha wax lacag ah kama qaado isticmaalka aalad lagu dhajinayo codsiyada kale. Dhanka kale, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho codsiyada bilaashka ah haddii aadan rabin inaad lacag ku bixiso dhamaadka, maadaama ay jiraan waxyaabo kale oo badan.
Fariinta digniinta ah
Marka la taabto, waxay ku tusin doontaa fariinta "K'ed by TNT Team", tan waxaad kuheleysaa waqti muhiim ah oo aad ku adeegsan karto, in kastoo mararka qaarkood ay muujiso 7 maalmood oo tijaabo ah, wax si dhif ah ugu dhaca dad badan oo Adobe Zii ku rakibey kombuyutarkooda, ha ahaato Windows ama Mac Os.
Adobe Zii waa Patch si fiican loo qaddariyo, haysashada darajo sare oo ah 4,5 dhibcaha 5tii, waa darajada ay adeegsadayaasha bulshada siiyaan, sidoo kale waxay ku fiicnaataa isbeddelada iyo cusbooneysiinta si joogto ah. Waxaa badanaa la cusbooneysiiyaa ugu yaraan hal mar "x" bilood kasta waxaana badanaa lagu dhajiyaa bogga rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Adobe Zii: Maxay tahay maxaase loo adeegsadaa?
Realme 8: Waa jaangoyn cusub oo qiimo u leh lacag